Daawo: Dhalinyarada Itoobiya Ee Qurbaha Oo Markii Ugu Horaysay Abid Cashir U Dhigay Tooshna Ku Shiday Kooxda Duugii DERG iyo Ginbot 7 Ee Dibada Ku Gabada. - Cakaara News
Daawo: Dhalinyarada Itoobiya Ee Qurbaha Oo Markii Ugu Horaysay Abid Cashir U Dhigay Tooshna Ku Shiday Kooxda Duugii DERG iyo Ginbot 7 Ee Dibada Ku Gabada.
Minnesota(CN) taariikhdu markay ahayd May.24.2015 oo kubeegan Axadii lasoo dhaafay ayaa waxaa kulan isugu yimid hool kuyaala Jaamacada George Washington University ee magaalada Washington DC kooxda duuga ah ee kasoo hadhay Dhargidii iyo Ginbot 7 oo caan ku ah aflagaadada, barobagaandada, iyo xumaan sheega qoomiyadaha Itoobiya. Waxayna wali aamin sanyihiin fikirka dhintay ee dhiig yacabnimadii, cadaadiskii iyo cabudhintii taliskii Dergida ee laga takhalausay 24 sano kahor kaasoo qoomiyadaha Itoobiya ay kala kulmeen cadaadis ba'an oo dhamaan xaquuqahoodii aasaasi iyo dimuqraadiba lagu xaqiray.
Hadaba waxaa kulankaasi kasoo qayb wiilal kamida dhalinyarada DDSI ee u dhalatay dalkan Itoobiya oo kala ah mudane Cabdisalaan Carab oo ah afhayeenka ururka dhalinyarada DYSE iyo Mudane Maxamed Shugri (Sangaab) oo ah gudoomiyaha jaaliyada DDSI ee North America. Waxayna markii hore aaminsanaayeen in kulankan uu aqoonyahan kasoo qayb galayo waxaana barnaamijka soo diyaariyay haayad kusheegta lagu magacaabo Society of Ethiopia Established in Diaspora (SEED).
Intaas kadib waxaa dhacday in halkaasi lagu abaalmariyo shaqsiyaad oo midba mar loo yeedho abaalmarina lagudoonsiiyo. Hadaba waxaa dhacday in ninkii makarafoonka hayay uu ku dhawaaqo magaca Tamagne Beyene oo ah nin caan ku ah qoomiyad nacaybka shaqadiisuna tahay meelaha ay kooxdani kushiraan inuu madaxda dalka ku aflagaadeeyo, kana hadla markasta kala qaybinta dadka qoomiyadaha Itoobiya. Sidoo kale waa ninka soo dira labada shaqsi ee u qaabilsan inay sida ayyga ugu ciyaan madaxda EPRDF iyo masuuliyiinta dalka marka ay yimaadaan wadamadaasi Maraykanka, iyadoo ay xusid mudan tahay in wakhtigii u danbeeyay ee ay madaxda dalka sida ayyga ugu wah-wah dhahaan ay ahayd xiligii madaxwaynaha DDSI mudane Cabdi Maxamuud Cumar iyo wafti uu horkacayo ay kusugnaayeen carigaasi.
Hadaba sida aad muuqaalka ku arki doontaan waxaa si geesinimo iyo wadaniyad leh hal mar uga diiday oo isla goobtaasi ku cadeeyay in Tamagne Beyene uu yahay kala-dile, danbiile aan u qalmin abaal oo xadhig mudan iyagoo si nabada halkaasi ku muujiyay fikirooda dimuqraadiyadeed iyo xaqiiqada dhabta ah ee ninkan danbiilaha ah. Waxayna halkaasi guul daro wayn iyo fashilaad xun kasoo gaadhay ninkaas aaminsan nidaamka laduugay ee Dhargidii iyo fikirada cidhiidhyoon.
Hadaba arintan oo guul daro iyo fashil god ugu gal ah ay ku noqotay kooxdaasi xaquuq-budhcadka ah ee Derg iyo Ginbot 7 ayaa waxaa lasoo bandhigay warbaahinta iyo barkulanka bulshada ee warbaahinta oo uu kamid yahay talefeeshinka TG oo isagu laf dhuun gashay ku noqday war-beeneedkii kooxda oo isticmaasha ESAT oo ah meesha barobagaandaha iyo beenta u haawisa. Waxaana yaab noqotay in aysan ilaa hada soo daynin arintan lagu fashilay, ESAT markay madaxda caayaan waxay u soo dayn jirtay BreaakingNews, hada oo si dimuqraadiya iyaga loola hadlayna way ka aamuseen.
Arintan ayaa waxaa aad u soo dhaweeyay dhamaan shacab waynaha reer Itoobiya maadaama shaqsiyaadkan aflagaadayn jiray madaxda iyo shacabka Itoobiya markii ugu horeysay godkoodii loogu galay oo ay yaab kunoqotay, sababta oo ah hada kahor wali lama arag cid iyaga u jawaabta oo talaabadan oo kale kaqaada.
Mar uu talefeeshinka TG wax kawaydiiyay arintan mudane Maxamed Shugri (Snagaab) ayuu sheegay in hada kadib dhamaantana qurbajoogta Itoobiya aysan u dul-qaadan doonin ciyaal suuqnimada kooxdan barobagaandistiga ah ee caadaystay in ay madaxda sharafta leh afkooda ku taagaan shacabkanaga xumaantiisana ay kashaqeeyaan ayuu kujawaabay. Mr Sangaab waxaa uu sheegay in ay tani cashir u noqota kooxdan oo wakhtigii u danbeeyay u soo dirtay shaqsi qaylo ayy leh madaxwaynahayaga sharafta leh ee DDSI mudane Cabdi Maxamuud Cumar oo hawlihiisa shaqo ee wadanka wata.
Mr.Sangaab waxaa uu sheegay in aysan isaga iyo saaxiibkii filaynin in la riix riixo maadaama ay si dimuqraadiya oo ay xaq u leeyihiin uga runsheegeen waxayna aamin sanaayeen in ay xubnaha haayada SEED ay si dimuqraadiya codkooda u siinayso. Wuxuuna canbaareeyay iyagoo gudanaya dimuqraadiyadoodii qaabkii ay ula dhaqmeen.
Waxaa kale uu Mr. Sangaab uga mahadceliyay dawlada Maraykanka oo ah wadan dimuqraadiya isagoo dhamaan dhalinyaradana u diray inay kaalintooda ilaalinta nabada iyo horumarka sii laba jibaaraan, wuxuuna carabka ku dhuftay in ay dhamaan qurbajoogta Ethiopia fiiri gaar ah u yeelan doonto shaqsiyaadkan sida waxshimada ah u fikiraysa.
Hadaba muuqaalka waxaad kadaawataa halkan. Riix halkan.